HomeSpainRonaldo:”Ma Aaminsani Inaan la Soo Ciyaaray Xiddigo iga Wanaagsan Aniga”
Waxa uu qirtay laacibka Real Madrid ahna xiddiga ugu fiican caalamka sannadka 2013 “Cristiano Ronaldo” inuu sameeyay qaladaad badan intii uu ku dhax jiray kubada cagta, isagoo dhanka kale sheegay inuu si weyn u doonayo in koobka adduunka uu la qaado xulka Portugal.
Ronaldo oo wareysi siiyay wargeys laga leeyahay France ayaa yidhi “Waxaan sameeyay qaladaad badan, laakiin aad ayaan ugu faraxsanahay, qaladaadkaas waxay iga dhigeen mid wanaagsan dhanka kubada iyo shaqsiyada intaba”.
Waxaan la soo ciyaaray xiddigo khatar ah oo heysta waxyaabo kala duwan, laakiin macquul maah inaan ku dhawaaqo wey iga wanaagsan yihiin, ma rumeysni taas, laacibiintu inta badan 5,10, iyo 15 kulan ayey soo bandhigaan qaab fiican, hase- yeeshee laacibka weyn waxaa looga baahan yahay in 60-ka kulan ee xilli- ciyaaredka uu is muujiyo.
Sidoo kale waxa uu daaha ka qaaday Cristiano riyadiisa koobka iyo xulka Portugal “Waan ogahay in arrintu tahay mid adag, laakiin riyadeydu waa inaan koobka adduunka amma kan yurub aan la qaado xulka Portugal.”
Ronaldo Oo Guuldaro Kala Baxsaday Real oo Valencia Daandaamisay